जब बिहेमा निम्तो गरेका निम्तालु नआएपछी बेहुलीले जे गरिन त्यसले सबैको होस् उडायो ! – List Khabar
Home / समाचार / जब बिहेमा निम्तो गरेका निम्तालु नआएपछी बेहुलीले जे गरिन त्यसले सबैको होस् उडायो !
admin November 8, 2021 समाचार Leaveacomment 129 Views
बिहेको भोजमा लाखौँ खर्च हुन्छ । धेरै मात्रामा पकाइएको खाना भने बमोजिमको निम्तालु नआउँदा खेर जान्छ । एकसाथ धेरै निम्तालु बोलाएर बिहे भोज ख्वाउँदा भएको खर्चको कसैले खासै मतलब गर्दैनन् । तर एक बेहुलीले भने यसमा आक्रोश पोखेकी छन् ।
एक विवाहमा निम्तालु नपुगेपछि बेहुलीले आक्रोशमा विहेमा भएको खर्चको बिल पठाएकी छन् । बिहेमा बोलाइएका निम्तालुको खाना, सजावट लगायतको खर्चमा बेहुला बेहुलीले प्रति दुई अतिथीकालागि लगभग १ सय ७५ युरो, अर्थात् करिब २७ हजार नेपाली रुपैयाँ खर्च गरेका थिए । यो खर्चमा रिसेप्शन डिनर, अन्य चीजको पनि व्यवस्था थियो । तर फोनका बावजुद निम्तालु पुगेनन् र बेहुलीले निम्तालुकोमा २७ हजारको बिल पठाइन् ।
आफ्नो बिहेमा भएको ठुलो खर्चलाई चुकाउन भन्दै ति बेहुलीले खर्चको लिष्ट पठाएकि थिएन् । निम्तालुले जब यो बिल पाए उनिहरु पनि चकित भए । बिलका साथमा एक नोट थियो, जसमा लेखिएको थियो, हामीले तपाईंलाई निम्तो गर्यौँ तर तपाईंहरु नआउने कुनै सूचना पाएनौँ । जसका कारण हामीले सास्ती पायौं । त्यसैले यो तपाईंले भुक्तानी गर्नु पर्छ ।
Previous तिहार मनाएर फर्कने क्रममा सल्यानमा दुर्घटनामा परि १२ जनाको गयो ज्यान
Next चेन्नईमा भीषण वर्षा, शहर जलमग्न भएपछि विद्यालय र कलेज बन्द